विश्वप्रकाश, गगन, रामहरिहरूले कांग्रेस कब्जा गर्ने माग उठ्याे, युवाहरू खुसी !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली प्रकाशित : शनिबार, फाल्गुन २४, २०७६
चार वर्षसम्म विभागहरू गठन गर्न नसकेका देउवाले अहिले आएर कि गठन गर्नुपर्यो ? प्रश्न उब्जिएको छ । देउवाले असन्तुष्ट समूहलाई पनि सहमतिमा ल्याएर विभाग गठन गरेको भए उचित हुने थियो ।
कोइराला परिवार सबैभन्दा धेरै देउवासँग असन्तुष्ट छ । कांग्रेसलाई आफ्नो बिरासत ठान्ने कोइराला परिवारले देउवालाई कहिल्यै पनि रुचाएन ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रयोग गरेर कोइराला परिवारले १४औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारभित्र पार्न चाहन्छ । यो कुरा पौडेलले बुझेका छैनन् । कोइराला परिवारप्रति लोकतन्त्रलाई बुझेका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले धेरै मोह देखाउनु हुँदैन ।
सोही कारणले पनि कोइराला परिवार पार्टीलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत र परिवारगत कुरालाई विशेष ध्यान दिँदै आएको छ ।
अबको १४औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसको नेतृत्व गगन थापा, बिश्वप्रकाश शर्मा, रामहरी खतिवडा, प्रदिप पौडेल, धनराज गुरुङ, अभिषेकप्रताप शाह,मिन कृष्ण महर्जन जस्ता युवा पुस्तामा जानुपर्ने कांग्रेस सुभेच्छाहरुको जोडदार माग छ।
देउवा वा कोइराला परिवारभन्दा पनि युवा पुस्ता जो कोहीले पनि कांग्रेसको नेतृत्व लिएर नयाँ ढंगले अगाडि बढेको राम्रो हुनेछ ।